DSLinux: Linux na-agba Nintendo DS | Site na Linux
DSLinux: Linux na-agba Nintendo DS
AurosZx | | Nkesa, GNU / Linux, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Amaara m na enwere ike wụnye linux na a PS3, n'ime a Wii, ọbụna na-agba ya na a mobile android (nke n'onwe ya na-arụ ọrụ na Linux Kernel) ma lee ya na ihe nkesa VNC ... Ma, na a Nintendo DS? Echeghị m na Linux ga-arụ ọrụ na ngwaọrụ nwere ngwaike na-esighi ike ... m wee leda ya anya. M ga-egosi gị otu esi etinye ma hazie ya maka ojiji gị, ọ naghị agbagwoju anya ma ọ chọrọ ụfọdụ ahụmịhe na usoro iwu iji ya.
DSLinux bụ obere-kesaa Linux edere na C y Onye Nchịkọta (ARM) Ọ nwere ike ịgba ọsọ Nintendo ds (Abụba na Lite, ọ bụghị DSi ma ọ bụ DSiXL) iji mpempe akwụkwọ site na oghere 1 ma ọ bụ 2 (DS ma ọ bụ GBA). Ọ dị oke mma na ọ nwere ike iji ihe nhazi ARM rụọ ọrụ na obere oge na naanị 4MB nke RAM, nke na-akwado mgbanwe nke Linux n'ihe gbasara Akụrụngwa.
Gụnyere iwu kernel nyere n'iwu (cp, mkdir, wget, rm ...), ụfọdụ ngwa ngwa (dị ka Links, madplay, nano ...) na egwuregwu egwuregwu (Advent4, njem na ụfọdụ egwuregwu freeBSD). Lee uru ya:
Inwe ike ịnụ ụtọ Linux ebe ọ bụla anyị gara (ọ dị ka Linux geek xD).
Kpọọ egwu, site na SD na WiFi.
Were intaneti mee ya Njikọ.
Jiri egwu kpọọ egwu egwu.
Dezie ederede na nano y vi.
Nmeghari ihe (choro oghere RAM 2).
Ezi, nri? Ugbu a, o nwekwara ọghọm:
Akụkụ nke ngwa na eserese eserese (yana PIXIL) chọrọ mmụba RAM.
Anyị enweghị ike ibutu ebe obibi ma ọ bụ egwuregwu site na ya (nke a anyị ekwesighi?).
O dakọtara na DSi (XL) ma ọ bụ 3DS (akụrụngwa anaghị akwado).
Ọ bụ nke mmepe (ikpe).
Ole na ole ngwugwu dị, ọ nweghị nchekwa ma ọ bụ ihe ndị yiri ya (ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịmegharị ngwugwu na ARM iji DSLinux gbaa ọsọ).
Ma, ọ bụrụ na anyị chọrọ iji ya na agbanyeghị naanị iji nwalee ya, mgbe ahụ, m ga-agwa gị otu.
Ihe mbu anyi gha eme bu ihu ma anyi ruru ihe ndi a:
Un Nintendo DS Abụba (nke mbụ, oké) ma ọ bụ Lite (sekọnd, nke dị gịrịgịrị). DSLinux adịghị dakọtara na DSi, obere na DSiXL ma ọ bụ 3DS.
una Mgbapu de Oghere 1 ma ọ bụ Oghere 2, ọ ka mma ma ọ bụrụ na ọ sitere na oghere 1 (Onye ọ bụla na-akwado DLDI onwe-patching, kasị eme).
Na-atụ aro: a Oghere RAM 2 gbasaa (opekempe otu Opera Mgbasa ma ọ bụ otu EZ-V 3 na 1) maka eserese eserese na akụkụ nke mmemme ahụ.
Nhọrọ: WiFi njikọ, maka nchọgharị na egwuregwu (ee, ị nụrụ nke ọma, ịnwere ike ịchọgharị). A na-ahazi ndị ọrụ niile dị iche iche ka ụfọdụ anaghị akwado… dị ka Intellinet Wireless 150N m : '(
Opekempe 150MB nke ohere efu na kaadi SD nke Flashcard anyị.
Ugbu a, anyị ga-ebudata DSLinux, Ebe a na gị ibe nbudata. Ma ọ bụrụ na ị chere na ị bụ ndị njem, ị nwere ike iji aka gị chịkọta ya (site na Linux, n'ezie).
N'okwu m, agbadara m Ihe ngwugwu DLDI, nke na-arụ ọrụ maka ọtụtụ flashcards (dslinux-dldi.tgz). Ọ bụrụ na anyị ga-agba ya na GBA Movie Player, budata ụlọ nke abụọ. Ndị ọzọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na anyị agaghị eji ha, yabụ anyị ga-eleghara ha anya 😛
Ihe na-esote bụ ịkọwapụ ngwugwu ahụ.
Anyị ga-enweta faịlụ abụọ (dslinux.nds na dslinuxm.nds) na a folda oku Linux. Ihe dị iche n'etiti faịlụ abụọ ahụ bụ na nke abụọ nwere ụfọdụ ngwa gbanwere iji wee rite uru na mgbakwunye RAM, dịka Nano-X y egwu egwu.
Na folda Linux anyị na-ahụ ụfọdụ nke kpochapụwo nchekwa niile distro, dị ka wdg, var, lib, usr, na n'ezie, ụlọ.
Na faịlụ izizi na folda ahụ ezuola, yabụ anyị ga-e themomi ha na kaadị SD anyị site na iji kaadi kaadị micro SD.
Ozugbo ihe niile dịchara, anyị na-etinye micro SD na mpempe akwụkwọ ahụ, mpempe akwụkwọ na DS anyị, anyị wee gbanye ya.
Anyị na-agba ọsọ ngwa DSLinux (Ọ pụtara ihe karịa ihe ọ bụla n'ihi na njirimara ya bụ Tux).
Ọ ga-amalite ịmalite, mgbe ahụ (ọ bụrụ na anyị họrọ ụdị DLDI) ga-akpaghị aka ite dị ka mgbọrọgwụ. Ọ bụrụ na ọ bụghị, onye ọrụ ahụ bụ mgbọrọgwụ na paswọọdụ bụ UClinux (rịba ama Nnukwu mkpụrụ edemede C).
Ozugbo ịbanye, akara mgbọrọgwụ (#) ga-apụta. Ọ bụrụ na ha ahọrọghị ụdị DLDI, ha nwere ike ịgbanwe okwuntughe mgbọrọgwụ site na ịpị ihe passwd (nke ahụ bụ nhọrọ) ma tinye paswọọdụ opekata mpe mkpụrụ edemede 5.
Mepụta / gbanwee rc.conf
Ndị nwere Linux ahụmịhe ga-amata rc.conf. Maka ndị na-emeghị, ọ bụ faịlụ nke edobere usoro sistemụ arụmọrụ. Na nke a, ha bụ ntọala nke DSLinux. Faịlụ a kwesịrị ịnọ na Linux / wdg / rc.conf, ma ọ bụrụ na anyị enyocha anyị agaghị achọta ya. Ya mere, ị ga-emepụta ya, mana echegbula, ndị mmepe ahụ gụnyere na otu folda ahụ ntọala ndabara na faịlụ akpọrọ Mmeghari.
Ihe anyị ga - eme (ọkacha mma na PC anyị, yana micro SD card reader) bụ oyiri ọdịnaya nke Mmeghari a mmmmmmmmmmmm.
N'ime enwere ntọala ụfọdụ anyị nwere ike idezi, mana m ga-elekwasị anya na di na nwunye, ihe dị mkpa.
Nke mbu, ebee ka o kwuru aha nnabata, Ọ bụ aha otu ahụ ma anyị nwere ike ịgbanwe ya ma ọ bụrụ na anyị chọrọ, n'agbanyeghị na ọ naghị enyere aka ...
Mgbe ahụ, ebe ọ na-ekwu «nwee ike_network_on_boot«, Bụ maka WiFi na-amalite na-akpaghị aka mgbe ịmalite DSLinux. Ọ bụrụ na ha ga-ahazi WiFi, anyị gbanwere ya "Ọ B" " (ya na ihe niile na ntinye). Ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị na-ahapụ ya n'ime "Mba".
Ọ bụrụ na anyị nwere njikọ WiFi ahazi na njikwa anyị, anyị nwere ike iji ha site na itinye nọmba site na 1 ruo 3 (nke ọ bụla kwekọrọ na ọnụ ọgụgụ nhazi ahụ na njikwa anyị, ọ bụrụ na ịchetaghị, lelee ya na egwuregwu nwere nhazi a). Nke a na - arụ ọrụ naanị na Router, ọ bụghị na Nintendo WiFi USB Connector. Ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị na-ahapụ ya efu.
Ọ bụrụ na anyị na-ahọrọ hazie WiFi n'aka, ka anyị gbadata, ebe o kwurudị mkpa»Anyị na-edebe ihe aha netwọk, optionally, ala na «ọwa»Anyị na-edebe ihe kanaal site na nke anyị DS ga-ejikọ (naanị ma ọ bụrụ na ọ na-enye anyị nsogbu njikọ). Na "akwa akwa»Na-aga nke anyị Igodo WEP (Ọ bụrụ na anyị anaghị eji okwuntughe, ọ na-anọgide na efu). Ọ bụrụ na anyị rawụta anaghị akwado DHCP, ma ọ bụ na anyị na-ahọrọ iji a static IP, anyị na-ekenye ndị «ip»Na«ọnụ ụzọ ámá»N’ebe ha iche, n’okpuru anyị tinye ihe nkpuchi ntanetị na«netmask"na"agbasa ozi n'ikuku»(Ọ bụ ezie na amaghị m ihe ọ bụ maka: /), nwekwara otu DNS ma ọ bụ abụọ.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ gbanwee font site ọnụ (ọ bụ ezie na m «dara » sistemụ), n'okpuru, ebe ọ na-ekwu «eme»Anyị na-etinye«/usr/share/consolefonts/alt-8irán8.psf»(Na ihe niile na ruturu).
Nke ahụ bụ isi ntọala. Ọ bụrụ na ihe anaghị arụ ọrụ maka gị, gbanyụọ ya.
Ọ bụrụ na ịchọrọ, ịnwere ike ịnwale nhọrọ ndị ọzọ (ana m akwado ha naanị ma ọ bụrụ na anyị nwere mgbasawanye RAM).
Jide anyị na tty (ọnụ ọnụ) dị mfe:
Ntuziaka ndughari: megharịa cursor blinking.
B: ogwe ohere
X: Peeji elu
Y: Peeji ala
Ya mere, n'ihi na elu ma obu ala na "echekwa" nke tty (ọnụ) anyị pịa L + X na L + Y otu.
DSLinux enwere ike iji ya maka ọtụtụ ihe dị iche iche, nke mere na ọ gaghị ekwe omume ịkọwa ha niile n'isiokwu a. Agbanyeghị, nke a bụ ngalaba maka ojiji ya, ebe ị ga - ahụ etu ị ga - esi sọfụ ịntanetị, kpọọ na njedebe, na - agba ọsọ eserese (dịtụ ejighị n'aka), melite sava weebụ, kpọọ egwu (yana ọbụlagodi na wget! O) na ndi ozo.
Ọzọkwa, ọ dị mwute, DSLinux ọ bụ ọrụ agbahapụ, ma ọ bụ dabere na onyinye. Ha nweere onwe ha gbanwee koodu isi ka ha wee chọọ ma bulite mgbanwe (ma ọ bụ na ọ bụghị) na ha akwukwọ ọrụ. N'ebe ahụ, ị ​​ga-ahụ ọtụtụ ozi gbasara mmepe na ojiji.
Ekele m niile ndị na-agụ!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » DSLinux: Linux na-agba Nintendo DS
Agbalịrị m ịgba ọsọ ya (enwere m Lite) mana n'ihi mgbochi ndị ahụ, ekpebiri m ịghara ịnwale ọzọ, echere m banyere ịwụnye ya na Wii nwanne nwanne m iji hụ ma m ga-etinye ụfọdụ egwuregwu na-enweghị isi na ya
Atụla anya ịrụ ọrụ zuru oke na Wii, mana ọ ga-adị mma. Karịa ihe ọ bụla n'ihi na (ọ bụrụ na anaghị m emehie) Linux distro maka Wii dabeere na Debian, agụrụ m na LXDE ọ dị ezigbo mmiri.
Enweghị m mpempe akwụkwọ, m kwesịrị ịzụta nke m ga-anwale, n'agbanyeghị na enwere m olileanya na anaghị m agba ya mmiri ...
Na na na, ọ bụ ike mmiri ya. Emere m ya obere oge, ihe ọjọọ bụ na achọrọ mgbasa RAM maka ihe kacha mma: /
Amaara m ya ma achọghị m ịnwale ya, damn ugbu a, m ga-anwale ya ma tụbara ihe egwuregwu vidio m niile na ahịhịa ka m wee ghara iri ahụ ...
Ọfọn, e nwere Flashcarsd na ezigbo ọnụ ahịa, enwere m nke na-efu m ihe dị ka € 20 na enwere m ya maka ndị emulators na ụfọdụ ngwa, "paireti" egwuregwu kama ole na ole, ndị na-eme egwuregwu na-ahapụbeghị na Europe ma ọ bụ na-ebipụta
Ee, enweghi otutu egwuregwu dika nke mbu ... yabụ ana m amu ihe mmemme na NFlib (na NDS) maka obere oru nke m bu n’obi ...
Kedu ka Linux si aga Ps3 ??? Anwalebeghị m ya
You chọrọ n’ezie irite lọtrị ahụ n’egwughị ya? Onweghi ihe obula gbalitere ihe obula
Ọ gwụla ma echefuru PS3 gị (nwere CFW 3.55 ma ọ bụ ala) ọ baghị uru. Ọ bụ Ubuntu Feisty Fawn, ya mere were ụfọdụ nkwubi okwu ...
Eneko Torres Gomez dijo
Ndewo, enwere m nsogbu, ọ bụ na FlashCard m bụ R4i 3ds (www.r4i-gold.eu) na mgbe m meghere ya, ọ na-egosi na ihuenyo dị n'elu na-akwụ ụgwọ ma ọ nọrọ ebe ahụ mgbe ọ na-egwu egwuregwu .nds ọ abịa na na 2 sekọnd na-agbadata na-ebugharị na ogwe ọganihu ma ọ bụrụ na ị nwere ike inyere m aka ime ka ọ rụọ ọrụ ma ejiri m ya na NDS Classic (abụba) ma ọ naghị arụ ọrụ na 3DS nke m nwere ọ naghị enweta n'ime ya n'ihi na m na-emelite ya mana na abụba ọ naghị eme ihe ọ bụla ma m gbalịrị ịbanye na menu faịlụ na nza ihu 2 na-adị ọcha ma nke a console LA Nintendo DS akpọghị m nke ukwuu anya
PS Enwere m ụdị nke kaadị ahụ na nsụgharị kachasị ọhụrụ dị ruo taa
Salu2 na daalụ
Zaghachi Eneko Torres Gomez
Chakra Linux 2011.12 dị